Waa Calaamadaha Khabiirka! Laba Jeer Oo Kaliya Markii Uu Garoonka Tababarka Ku Arkay Ayuu Xaqiiqsaday Inuu Noqonayo Xiddig Weyn - GOOL24.NET
Waa Calaamadaha Khabiirka! Laba Jeer Oo Kaliya Markii Uu Garoonka Tababarka Ku Arkay Ayuu Xaqiiqsaday Inuu Noqonayo Xiddig Weyn
Ronald Koeman waa khabiir sannado badan kusoo jiray kubadda cagta, waana difaaca ugu goolasha badan taariikhda kubadda cagta. Wacdarihii uu garoomada ka dhigi jiray ayaanu shaki ku jirin, iyadoo uu ka mid ahaa xiddigaha faro ku tiriska ah ee farta lagu fiiqi jiray waqtigiisii ee dhalinta iyo difaacistaba isku darsaday.
Waqtigiisii ugu fiicnaa waxa uu kusoo qaatay kooxda Barcelona, hase yeeshee xulka qaranka Netherlands ayuu ka mid ahaa hoggaamiyeyaashooda inkasta oo ay joogeen oo uu ka garab ciyaarayay Ruud Gullit, Van Basten, Frank Rijkaard iyo xiddigo kale oo waaweyn.
Shaqada tababarka ayaa uu sidoo kale waqti badan kusoo qaatay, waxaana uu laba sannadood oo wax dhiman ku qaatay Barcelona oo uu ciyaartooyo badan oo da’yar ah usoo dallacsiiyey kooxda koowaad.
Mid ka mid ah ciyaartoyda uu keenay kooxda koowaad ee da’yarta, waxa uu xaqiiqsaday inuu xiddig weyn noqonayo markii uu laba jeer oo kaliya tababarka kusiiyey kooxda koowaad, isla markiibana waxa uu go’aansaday inuu kusoo daro kooxdiisa oo uu fursado badan siiyo, taas oo sidii uu u qiimeeyey u dhacday.
Xiddiga hibadiisa labada tababar ee kaliya uu ku xaqiiqsaday Koeman ayaa ah kubbad-sameeyaha reer Spain ee Pedri oo xili ciyaareedkii tegay dhaawacyo badan soo gaadheen balse sannadkii ka horreeyey ahaa laacibkii ugu safashada badnaa guud ahaan kubadda cagta, isagoo si joogto ah u ciyaaray Euro 2020, Nations League, ciyaarihii olombikada ee Tokyo iyo sidoo kale kooxdiisa oo uu si joogto ah ugu ciyaaray, waxaanu saftay 73 ciyaarood hal xilli ciyaareed guihii.
Koeman oo wax laga weydiiyey sida uu laacibkan yar ugu soo saaray kooxda koowaad ee Barcelona ayaa yidhi: “Kiiska Pedri waa mid cajiib ah, sababtoo ah waxa aan xasuustaa markii ay Barcelona la saxeexatay in aan la hadlay, anigu ma garanayn waqtigaas. Labadii tababar ee ugu horreeyey ayaan ku ogaaday inuu yahay ciyaartoy weyn. Waxa igaga filnaaday labadii tababar ee ugu horreeyey.”
Si kastaba, dad badan ayaa Pedri barbar-dhiga halyeygii Spain iyo Barcelona ee Andres Iniesta oo la sheego inuu leeyahay qaab ciyaareedkiisii oo kale.